Nezvedu - Xuzhou Tianqi Mining Technology Co., Ltd.
Yakashandiswa Mining Hardware
Kugamuchirwa kuMining Store
Chii chinonzi bhokisi remigodhi?
Kubva muna Gumiguru 31, 2008, ID Satoshi Nakamoto akashandisa bepa rine mapeji mapfumbamwe kugadzira yakaenzana neyitrioni yuan yeBitcoin kunze kwemweya mutete. Kubva ipapo, mune ino yakazara yakasarudzika isingazivikanwe network, pakave nemubairo wakarongeka kune wese anoshandira mhinduro zvinoenderana nemubvumirano mashandiro PoW: Uchapupu-hwe-basa uye ndiye wekutanga kupedzisa block yekurongedza node. Mubairo uyu ma12.5 bitcoins izvozvi, kana angangoita $ 85,000. Izvi zvinozivikanwa se "kuchera".
Hunhu hweuchapupu-hwe-basa hwakazara. Iko kugona kwakasimba kwekomputa yemidziyo yako ndiko, mukana wepamusoro wekuverenga mhinduro. Mumazuva ekutanga, vashandi vemumigodhi vaishandisa maCPU nemaGPU kumigodhi zvakasiyana. Nekuwedzera kwesimba remakomputa, madziva emigodhi anounganidza akawanda emagetsi ekombuta akabuda. Dziva remigodhi rine mukana wakakura wekuverenga mhinduro uye kuwana mibairo, kuitira kuti munhu wese awane mubairo uye mugove uwedzerewo. Panguva imwecheteyo, dambudziko rakaonekwawo,: huwandu hwakawanda hwevacheri vakaunganidzwa pamwechete, vanogadzira uye vanogadzira ruzha uye kupisa, simba guru rekushandisa. Pane dambudziko rakakosha rakaoma kwazvo kutakura, nekuti kune vakawanda varimi vemigodhi uye tambo yemidziyo. Saka bhokisi remugodhi rakazvarwa.
Chinangwa chedu ndechekugadzira yakavhurika yemari system yenyika.
Ichi chigaba chemugodhi chakakosheswa chinopa vanochera mugodhi mhinduro inoshanda kupfuura kuchera matura. Chikamu chakakura chemubhadharo wemigodhi ye cryptocurrency unouya kubva mukushandisa magetsi nemitengo yekuchengetera. Midziyo yemigodhi ine midziyo inogona kuendeswa nyore nyore kumatiraki nekuendeswa kune chero kwaunoda kuenda nesimba rakaderera. Izvo hazvirambidzwe nesaiti, uye ine simba kufamba, uye inodhura-inoshanda pamwe nekugadziriswazve.
Tianqi Mining yakapedza nhoroondo yakapfuura yekugadzira emigodhi mabhokisi ane mudziyo Refit. Inoshandisa simbi nyowani isina huremu kuburitsa mabhokisi emigodhi, ichivaita kuti igare yakasimba uye isingaremi. Uye zvakare, isu takavaka macomputer emari yemigodhi yemakomputa iyo inogona kubata vese ASIC neGPU vanochera kuti vasangane nezvinodiwa zvevatengi vese. Kana iwe uchida 40-tsoka mudziyo, yakanyatsogadziriswa bhokisi rekumigodhi, kana akasiyana akasiyana anodikanwa, muTianqi, chero zvido zvinosangana. Muna 2020, bhokisi redu rekuchera richangobva kugadziriswa uye bhokisi rakacheneswa nemafuta rakatumirwa uye kuiswa mukushandisatomer.
"Isu tiri kambani inoshanda zvikuru mumabasa ekutanga eBit-coin. Bhizinesi rayo rakakamurwa kuita zvikamu zviviri: Kuburitsa zvakatemwa zvakasiyana zvemabhokisi emigodhi efoni, kupa michina yekuchera yepasi yakaderera pane mitengo yemusika"
Mhoro! uku ndiko Tianqi Mining. Isu tiri kambani inoshanda mukugadzira uye kutengesa kweiyo cryptocurrency nhare yekumigodhi bhokisi uye muchina wemigodhi wakashandiswa. Tine fekitori yekugadzira inosvika zviuru zvitatu zvemamirimita, inogadzira uye kutumira kunze kwakasarudzika kwakasiyana kwemabhokisi emigodhi enhare anodikanwa nevatengi muXuzhou China. Tinogona kugadzirisa emabhokisi emigodhi maererano nezvinodiwa nevatengi veparamende. Ehe, isu zvakare tine nhamba hombe yemabhokisi emigodhi emafoni ayo anoshandiswa mumusika weChinese muchitoro. Welcome kushanyira fekitari yedu! Isu tinopawo pane-saiti kumisikidza uye mabasa ekuchengetedza zvinoenderana nezvaunoda. Muchidimbu, Tianqi inokupa iwe izere seti mhinduro kune zvese zvaunoda mumigodhi cryptocurrency,
Zviwanikwa zvedu zvinokwezva vazhinji varidzi vemigodhi veChinese nevashandi vakuru vemumigodhi, saka tinogona kuwana zvirinani zviwanikwa zvembiri pamutengo wakaderera. Naizvozvo, isu tine zvakakwana zvakanakira kuwana iyo yekuchera muchina iwe yaunoda mumugodhi wemashini musika. Isu tinovimbisa nerukudzo rwekambani yedu: yega yega yeBit-koini yekumigina muchina yatinotumira inoedzwa nechikwata chedu, uye tinogona kuona zvakajairika mashandiro emuchina wega wega wezvemigodhi.
Taura nesu ikozvino!
Nyanzvi ye cryptocurrency yekuchera mabhokisi ekugadzira uye mutengesi wemasipiri-emigodhi michina ine mutengo uri pasi pe mutengo wemusika
Tora A Quote
2020, inogona kunge iri gore reBitcoin counterattack
Chii chaizvo chinonzi blockchain?
Nei Bitcoin ichidhura? Chii chinonzi Bitcoin chinjana?
300 Mamita Kumabvazuva kweEast Gate yeLong Dong Mine uye Xuji Highway, Junction yeZhendong Vavakidzani, Longgu Town, Pei County, Xuzhou City.
antbox mudziyo, antminer mudziyo, btc mudziyo, crypto yekuchera asic, akashandisa michina yemigodhi yekristpto, mudziyo we bitmain,